VISTA-one bedroom apartment in Veliko Tarnovo - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Павлина
U-Павлина Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisanda kulungiswa elinekamelo lokulala elilodwa elilala abantu abangaba ngu-4 ngokubukwa okukhulu okungaphazamiseki kuyo yonke i-Tsaravets Castle. Itholakala enkabeni ye-Old Town emangalisayo (i-Samovodka Charshia) enazo zonke izitolo zayo zemisebenzi yezandla, ama-bar athandwayo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokuheha izivakashi.
Le ndlu inikeza ikamelo elilala abantu ababili elihlukile, elinendawo yokuhlala evulekile enekhishi, indawo yokudlela kanye nendawo yokuphumula enombhede wesofa ofanele izingane ezingu-2 noma umuntu omdala.
Ilungele ukuvakasha kokuhlala isikhathi esifushane noma eside.
Ifulethi i- VISTA linamakamelo amabili ahlukene, indawo yokuphumula evulekile evulekile enombhede wesofa, indawo yokudlela, ikhishi elinakho konke, indlu yokugezela, indlu yangasese kanye nesitoreji.
Uma ufuna ukuzithokozisa nge-Veliko Tarnovo e- kungcono kakhulu, hlala e-Old Town!!
Izindawo ezidume kakhulu zokuvakasha zedolobha: ukwakhiwa kwezakhiwo nemnyuziyamu ye-Tsarevets, isonto elithi "St. 40 Martyrs", iminyuziyamu, i-Cathedral, i-St. Stambolov Street enokubukwa okuhlaba umxhwele kwesikhumbuzo se-Assenevtsi nomfula i-Yantra, i-Gurko Street zingaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka efulethini. Ngesikhathi esifanayo, le ndawo inikeza ukuthula nokuzola kanye nombono omangalisayo wegquma i-Trapezitsa ne-Tsarevets, nethuba lokubuka umbukiso wokukhanya "Umsindo Nokukhanya".
Isendaweni engamamitha angu-100 ukusuka e-Samovodska Market, enezingqungquthela ezinhle zemisebenzi yezandla, izitolo zesikhumbuzo, isitolo sokudla sendawo ezungezile - i-Bakaliya, i-Shekerdzhinitsa nekhofi esihlabathini, ibhikawozi.
Umgwaqo wokuthenga wedolobha ukude ngemizuzu engu-5, lapho ungathola khona izindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu nama-bar.
Idolobhana lase-Arbanassi lingamakhilomitha angaba ngu-4 ukusuka endaweni yokuhlala. I-Transfreon Monastery itholakala emizuzwini engu-15 ngemoto. I-Kainovo Monastery, i-Hotnishki Waterfall, i-Bozhentsi, i-Dryanovo Monastery, i-Etara iqhele ngehora eliyi-1 ngemoto.
Ngendawo ekuyo, ifulethi le-W Vista lifanele kokubili ezokuvakasha nabantu abahamba ngebhizinisi abafuna ukuphumula, bajabulele ukubuka indawo enhle efulethini.
UПавлина Ungumbungazi ovelele